DHAGEYSO: "Dadka GEDO iyo Jubooyinka wax shaqo kuma laha baarlamanka Axmed Madobe" - Caasimada Online
Home Warar DHAGEYSO: “Dadka GEDO iyo Jubooyinka wax shaqo kuma laha baarlamanka Axmed Madobe”
DHAGEYSO: “Dadka GEDO iyo Jubooyinka wax shaqo kuma laha baarlamanka Axmed Madobe”
Muqdisho (Caasimada Online) – Siyaasiga Maxamuud Sayid Aadan ayaa kasoo horjeestay baarlamaanka maamulka KMG ee Jubba ee dhawaan lagu dhawaaqay, ka dib markii lasoo xulay xildhibaanada Baarlamaankaasi.
Waxa uu sheegay in markii horeba aan lagu heshiin maamulka Jubba, islamarkaana taasi ay keenayso in lasii huriyo oo kaliya xaaladda ka jirta gobalada Jubooyinka iyo Gedo.
Mas’uulkaan ayaa meesha ka saaray in shacabka Jubooyinka iyo Gedo ay u dhan yihiin baarlamaankaan, isaga oo shaqsiyaad gaar ah ku eedeeyay in ay leexsadiin masiirkii shacabka gobaladaasi, waa sida uu hadalka u dhigaye.
“Beelaha Jubooyinka Iyo Gedo Shaqo Kuma Lahan Baarlamaanka Jubba, dad gaar ah ayaa wada qorshahaan, markii horeba maamulka Kismaayo jooga looma dhameen” ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan.
Dhinaca kale Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in la qaban doono shir ballaaran oo looga tashan doono aayahay gobalada Jubooyinka iyo Gedo, islamarkaana laga tashan doono hanaanka maamul sameynta.